Affenpinscher - Ihe ichere anya na nkịta nkịta a
Nkịta ndị anyị nwere ike ịkọwa dị ka Affenpinschers taa, apụtawo na ọrụ osise German nke malitere na narị afọ nke 16: na-egosi ha dị ka ndị na-eri ọnụ na ndị ibe. Agbanyeghị, dị ka ọ dị n'ọtụtụ ụdị, ọ nweghị ndekọ ederede a pụrụ ịdabere na ya nke ụdị ahụ ruo na ngwụsị narị afọ nke 19. N'oge a, ọ dị ka ọnụọgụ abụọ ... Gụkwuo
Airedales dị oke mma dị ka nkịta ịchụ nta, nkịta nche, na ọbụnadị nkịta na-erube isi ma na-eme mkpọtụ, mana ha bụ, nke mbụ, ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị ọbịa na-atụrụ ndụ.
Akita: Nnukwu Nkịta Ebube si Japan
Akita bụ nnukwu nkịta nke si Japan. Ha nwere ike, nwere ike ịkọ akụkọ ihe mere eme ha na Japan oge ochie, yana akara ahụike na anụrị.
Kedu ihe bụ Afghan Hound? Ndị Afghanistan si na otu hound, ma ọ bụ bụrụ ndị ziri ezi sitere na ezinụlọ ahụ na-ahụ anya, nke ha niile dị oke ọsọ, nkịta na-acha uhie uhie dị ka akụkụ. Nkịta ndị Afghanistan dị site na 26 ruo 28 sentimita asatọ na akpọnwụ, ebe nkịta na-anọ 24 sentimita 26 n'ogologo. Nwoke tụọ ... Gụkwuo
Alaska Husky abụghị naanị nkịta dị elu. Ọ bụkwa egwuregwu na ezinụlọ dị nwayọọ. Gụkwuo iji chọpụta banyere nke a crossbreed!
Azụpụtara Klee Kai site na Siberia na Alaskan Huskies, yana enyemaka nke Schipperke na American Eskimo iji gbadata na-enweghị ịba ụba. Dị ka nke a, ị ga-ahụ otu njirimara ahụ dị na huskies. Ha na-achọ ịmata ihe, na-achọsi ike, na-agbasi ike maka oke ha, ndị aghụghọ na ndị mgbapụ mgbapụ. The Klee ... Gụkwuo
The Complete Guide na American olulu ehi Terrier
Oghere Ndọkịta Amerịka na-enwetakarị RAP, mana na ntuziaka anyị zuru oke, ị ga-amụta n'oge na-adịghị anya na nke a bụ otu n'ime ụdị ụdị ọhụụ na ịhụnanya.
Onye America Alsatian nwere ike ịdị ka nkịta ọhịa ma ha dị nwayọ ma nwee mmekọrịta. Lelee ntuziaka anyị iji mụtakwuo banyere nnukwu enyi canine a.
Onye nduzi ọ bụla nwe ụlọ kachasị na Alaskan Malamute
Ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta a na-agba ọsọ ma na-eguzosi ike n'ihe nke yiri nkịta ọhịa, otu n'ime ụdị udiri ị ga-atụle bụ Alaskan Malamutes. Chọpụta ihe kpatara ya site na ịpị ebe a!
Na-achọ nkịta onye na-eche nche nke ọma, gịnị kpatara na ị gaghị enwe njikọ abụọ? Bullypit nwere ike ịbụ canine ị na-achọ. Gụkwuo ihe banyere Bullypit.
Mara American Bandogge dị ọkụ ma sie ike
American Bandog, nke a makwaara dị ka American Mastiff, bụ otu n'ime nzọ gị kachasị mma iji mee ka ụjọ jide ndị na-achọ ịlụ ọgụ. Chọpụta ma ị nwere ihe ọ ga - abụ onye nwe ya!
Jikere ka ndị obi ọjọọ na-ahụ n'anya nke American Bully merie obi gị, yana ntuziaka anyị na-enye ihe ọmụma na-ekpuchi ihe niile ịmara banyere ụdị a.
American Golden Retriever: Nke a bụ Goldie kacha mma maka gị?
O nwere ike ịbụ na ị hụla Goldie nwere ụdị ọla edo dị iche iche, mana enwee ụdị ọla edo atọ. Kpoo ọkọlọtọ US maka American Golden Retriever.
Mmiri Spaniel America - Ihe to Ga-atụ Anya na Nzube Nkịta a
Mmiri Spaniel America (ma ọ bụ AWS, maka nkenke) bụ otu n'ime ụdị anumanu ole na ole mepụtara na America. Ihe ndekọ a pụrụ ịdabere na ya nke AWS laghachiri na 1865. Ọ bụ ezie na nkịta kpọmkwem ebe ọ malitere bụ esemokwu, a kwenyere na ya na mbụ pụtara n'akụkụ ndagwurugwu Wolf na Fox River nke Wisconsin, na ... G moreKWUO
Aussiedoodles: Kpoo Einstein nke ụwa nkịta
Kedu ihe ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ị gwakọtara nkịta abụọ kachasị mara mma, nke kachasị mma ndị mmadụ hụrụ n'anya ebe ahụ? Zute ọmarịcha Aussiedoodle ma ọ bụ Aussie Poo. Gụọ ebe a!
You nwere ume zuru ezu maka Nkịta Ọhịa Australia?
A maara Dog Australian Cattle Dog maka uwe mgbokwasị ya, ọdịdị ike ya, na isi ike ya. Hụ ma nkịta ndị a mara mma zuru oke maka gị.
Nkịta hypoallergenic na-ele anya dị ka anụmanụ mara mma, olee ihe ọzọ na-eme ka Australian Labradoodle dị iche na doodle ndị ọzọ niile?
Ndị na-ewepụta ihe na Australia: Ọkpụkpụ na-agba agba
Ezigbo ezinụlọ & nkịta na-arụ ọrụ dị ịtụnanya, Australian Retriever (Australian Shepherd Golden Retriever mix) ga-ejide gị n'anya nkịta nkịta!
Enweela mgbe banyere Texas Heeler? A na-akpọkarị ya Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ Blue Heeler mix, nke a nwere ike bụrụ nkịta kachasị azụ.
aja aja na ọcha onye ọzụzụ atụrụ German
aha alpha na omega wolf
kedu ụdị oke ehi dị
otu esi akwụsị nwa nkita izu asatọ ịta
ngwakọta pomeranian poodle zuru oke